Inona ny famoronana - aiza no manomboka ny famoronana?
Inona ny famoronana sy ny fomba hampivelarana fahaizana mamorona?
Inona ny famoronana? Voasoratra ao amin'ny tontolon'ny sarimihetsika, na andininy iray, feno traikefa ara-pihetseham-po, na sangan'asa ara-javakanto vaovao na lovia mahafinaritra novolena tamin'ny cook? Ny zavakanto nentanin'ny fanahy no aseho amin'ny zavatra samihafa, tsy manan-tsahala sy tsy manan-tsahala izy, tsy ho an'ny mpanoratra, fa indraindray ho an'ny olona rehetra.
Creativity - inona ity?
Ny maha-tokana no fototra ijoroan'io hevitra io. Ny tena hevitry ny hoe "zavakanto" dia midika ny fizotry ny asan'ny olombelona, ​​izay miteraka soatoavina sora-baventy, na ara-nofo na ara-panahy. Ny vokatra toy izany dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny mpanoratra ity asa ity. Izany koa dia manome lanjany ny vokatra farany. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny dingana famokarana ny famoronana, ny mpanoratra dia maneho ny maha-izy azy manokana.
Psychology amin'ny famoronana
Ny siansa, ny teknolojia, ny zavakanto, ny andro tsotra amin'ny fiainana andavanandro - ireo rehetra ireo dia mety ho sehatra ahafahan'ny olona manavaka ny maha-tokana azy. Ny sehatry ny psychologie manontolo dia mandinika ny asa famoronana ataon'ny olona. Ny psikology dia mandalina am-pahibemaso ny fomba fisainana sy ny famoronana , ny aingam-panahy, ny fisainana, ny maha-izy azy ary ny fisainana. Nandritra ny taona maro, ny fianarana ireo faritra ireo dia tsy nanome valiny mazava momba ny fanontaniana hoe inona ny famoronana ary ahoana no hampidirana azy ao amin'ny fiainan'ny olon-tsotra. Ny fototry ny psikolojika amin'ny famoronana dia ny fifandraisana eo amin'ny mpanoratra sy ny vokatra.
Ny olona dia tsy manana fetra eo amin'ny tontolon'ny faniriana sy ny faniriana. Ny fitiavan-tena no maniry ny zavatra rehetra tsy ananan'ny olona, ​​ny olona iray izay maniry nofinofy, maniry zavatra tsy misy eo amin'ny natiora, avy amin'ny olona mahay mandanjalanja dia mangetaheta ny fahalalan'izao tontolo izao ny hetahetan'ny famoronana. Ny filôzôfia manontolo amin'ny famoronana dia mikendry ny hahatonga ny firindrana sy ny hatsaran-tarehy, ary ny sangan'asa noforonina dia natao ho tombontsoan'ny sivilizasiona.
Ny endriky ny famoronana dia afaka mikatsaka ny fanatanterahana ny heviny, ny heviny, ny sidina fantasy amin'ny karazana hetsika samihafa:
Ny famoronana siantifika - karazana tranga isan-karazany, ny vokatra farany - fahalalana.
Ny fahaiza-mamorona teknika dia fampandrosoana azo ampiharina na teknolojika, ny vokatra farany dia rafitra na rafitra iray.
Ny zavakanto ara-javakanto no fototra iorenan'ny tontolo, ny faniriana ny hatsarana. Ny vokatra farany dia endrika artista (poem, sary, sary sokitra).
Ny famoronana dia ny fahitan'ny zavakanto, ny fandikany.
Ny famoronana ankizy dia ny fomba fisainan'ny ankizy, ny fisainany.
Ny fahaiza-mamorona fahaiza-mamorona dia fomba iray manokana hampianarana fahalalana, ny tanjony dia ny hampianatra zava-baovao.
Inona no mampivelatra ny mombamomba ny olona?
Tsy misy afaka manome valiny mazava sy voafaritra amin'ny fanontaniana napetraka. Mba hanokafana sy hampivelarana fahaiza-mamorona dia tsy maintsy mamaly ny tenany amin'ny fanontaniana ny olona, ​​inona ny famoronana manokana ho azy? Ny fampivelarana ny fahaiza-manaon'ny maha-olona amin'ny famoronana dia afaka manampy amin'ny firindrana, mendrika ny miezaka mijery ny tontolo mahazatra amin'ny maso samihafa, manomboka amin'ny angom-baovao. Ny famerenana ny sainao dia mora kokoa ny mamoritra, avy eo ny vaovao iray izay omen'izao tontolo izao. Ny tena mpamorona dia velona, ​​amin'ny olona tsirairay.
Inona no mampiroborobo ny famoronana?
Ny fandeferana amin'ny tontolo ivelany sy ny fiadanana anaty no fototry ny dingana famoronana. Ho an'ny olona misokatra ho an'izao tontolo izao, tsy misy fitsaratsaram-poana sy fitsarana an-tendrony, mora kokoa ny mahatsapa ny zavamisy manan-danja amin'ny famoronana, mahatsapa ny fofona mozika ao ambadiky ny azy:
Ilaina ny hitady mozika izay misy fiantraikany tsara eo amin'ny fomba famoronana.
Taratasy avy amin'ny tanana, fa tsy amin'ny alalan'ny ordinatera, no mandray anjara amin'ny famoronana.
Ny fisaintsainana no fomba tsara indrindra hialana amin'ny filaminana.
Ireo kilasy misy fikambanana malalaka dia hamoha ny fisainana.
Aza mihantona, indraindray mila mieritreritra zavatra lavitra ianao. Ohatra, ny fomba hankalaza ny taona vaovao amin'ny 2030.
Ny loko manga sy maitso maitso dia mitarika ny famoronana.
Ny fanovana ny sehatra dia afaka manampy amin'ny famoronana.
Mihomehy, na dia amin'ny hery aza. Hisy vokany tsara eo amin'ny atidoha izany.
Manaova zavatra amin'ny tanana.
Fiaran-dalamby. Amin'ny fanatanjahantena, tsy vitan'ny hoe mihamafy ny vatana, fa ny atidoha ihany koa no manafaka tanteraka.
Andramo vaovao vaovao. Ny fiainana sy ny asa dia mifandray akaiky, ny fihetseham-po vaovao dia afaka mitondra, ohatra, fitsangatsanganana any ivelany, ny fandresena ny tendrombohitra, ao anaty rano lalina.
Matory, avy eo ny "maraina dia hendry kokoa noho ny hariva" tena miasa.
Aiza no manomboka ny famoronana?
Ny hevitra na ny hevitra dia ny fiandohan'ny asan'ny mpanakanto, ny mpanoratra, ny mpanoratra, ny mpamorona, ny lamaody. Ny dingana famoronana dia manomboka amin'ny drafitra manjavozavo, ny endriky ny asa manontolo. Ny olona tsirairay dia manana izany dingana izany amin'ny fomba samihafa, saingy mizara ho dingana telo. Raha tsy mitandrina ny drafitr'asa toy izany, dia teraka tampoka ny drafitra ary tsy hohajaina foana.
fanjarian-tsoa sy fanitsiana ny famoronana ny fahatsapana;
ny fisehoan-javatra ara-javakanto;
Kanto sy saina
Ny sary vaovao dia noforonina noho ny zava-misy iainan'ny tontolo manodidina. Saingy mifangaro amin'ny fisainana izy ireo, dia mahatonga ny asa tena miavaka. Ny tsindrim-peo ara-tsiansa dia ahafahanao mahafantatra zavatra iray raha manao izany nefa tsy mifandray aminy. Ny famoronana eo amin'ny fiainan'ny olona iray dia mifandray mandrakariva amin'ny fisainana, ny ohatra nasehony dia azo jerena rehefa mandalina ny fizotry ny famoronana. Ohatra, rehefa mamorona zavaboary manga sy zavatra samihafa, dia ampiasaina manokana ny teknika.
famindrana - ny famindrana ny subject amin'ny toe-javatra vaovao, tsy mahazatra;
manoratra - mametraka tanjona amin'ny karazana manokana;
fampitahana - mamorona sary avy amin'ny analogy miaraka amin'ny hafa;
fanindrahindrana na fanakanana;
Ny asa aman-draharaha vaovao sy ny fananana dia aseho amin'ny zavatra;
fanakorontanana - mamorona sary avy amin'ny hevitra roa samihafa.
Matetika ny ankamaroan'ny olona no mahatsapa an'ireny hevitra ireny. Fa ny fampitahana toy izany dia diso. Ny teny hoe "zavakanto" tamin'ny faramparan'ny taona 80 dia niditra tao amin'ny orinasa mpandraharaha, ary taorian'izay dia nanomboka nampiasaina tamin'ny faribolan'ny faritra izy io. Ny fahaiza-mamorona dia fahaizana ahafahan'ny olona maneho amin'ny fomba tsy miangatra, ny fomba fisainana, ny fahaizany mampiroborobo hevitra. Ny famoronana dia mitaky asa ho an'ny famoronana, ny fahaizana mandresy ny stereotype, ity no antony manosika ny vaovao. Ny famoronana sy ny famoronana dia mifandray akaiky, dia sarotra kokoa ny misaraka.
Ahoana no hampivoarana ny famoronana?
Ny miezaka bebe kokoa, dia ny fampandrosoana ara-dalàna ny olona amin'ny sehatra rehetra. Ny fahaiza-mamorona ny olona iray dia tsy voafetra, ary amin'ny fampiofanana mety, dia afaka mahagaga ny tompony izy, izay nisalasala ny fisian'ny rafitra famoronana eo amin'ny toetrany:
Fomban'ny maraina. Mifohaza, alaivo avy hatrany ny penina, ny taratasin-tsoratra ary ny manoratra. Momba inona? Momba ny zava-drehetra! Ny zavatra manan-danja indrindra hanoratanao, tsy azonao inoana manokana. Farafaharatsiny farafaharatsiny tokony ho voasoratra.
Manontany ny fanontaniana amin'ny zavatra na zavatra rehetra isika: "Ahoana raha?". Ahoana, ohatra, raha afaka miresaka ny alika? Ary ahoana raha tsy mangina ny olona rehetra eran'izao tontolo izao? Ity fomba ity dia natao hamoronana ny fisainana .
Mamaky sy miditra amin'ny teny samihafa. Io fomba io dia tsy maintsy manery ny atidoha hanaisotra ny fisainana mahazatra ary ahitana ny fisainana. Ilaina ny mandray teny roa samihafa mba hampiray azy ireo. Ohatra, ny ondana + bodofotsy = tsofoka, curtain + a tulle = a gallery.
Ny fomba ambaran'i Torrens dia mifototra amin'ny karazana skribbles, izay antsoina koa hoe doodles. Ao amin'ny taratasy dia misy sary famantarana toy izany (boribory maromaro na kianja, lakroa, rhombuses ary ny sisa). Anisan'izany ny fantasy ary ny fampiasana ireo tarehimarika hita.
Fomba fijerena lohahevitra. "Raiso" zavatra azo tsapain-tanana, ohatra ny pensilihazo, jiro, lanitra ary manokatra boky (gazety, gazety) amin'ny pejy. "Grab" teny 5 mahazatra, mampifandray azy ireo amin'ny foto-kevitra.
Tsy mandeha ny fanatanjahantena, ny fitaomam-panahy tsy miditra amin'ny zava-drehetra dia maitso sy maizina ary mazava ho azy fa tsy mandray anjara amin'ny fahaterahan'ny hevitra vaovao na sangan'asa. Ny krizy ara-tsakafo dia afaka manohina ny olona iray izay misy ifandraisany amin'ny famoronana ny asany na ny fiainany. Inona ny olana amin'ny famoronana? Aza mikatsaka ireo valim-panadihadiana eto amin'izao tontolo izao manodidina anao, raha tsy mahazo ny tenanao. Hitady valiny amin'ireo fanontaniana "Inona no atao hoe famoronana? Ahoana no hanombohana mamorona indray? Aiza no ahitanao ny fitaomam-panahy? "Tsy hiteny afa-tsy raha misy olona tsy mahita ny tanjaka mba hitadiavana ny filaminana.
Tsy misy soso-kevitra sarotra izay afaka manampy amin'ny famerenana ny rafitra noforonina ary tafavoaka velona amin'ny krizy famoronana:
Ilaina ny mamorona (manoratra, manintona, manamboatra, sy ny sisa) eo amin'io toerana io.
Ilaina ny manolotra fotoana iray sy fotoana iray hanaovana asa fanentanana.
Alohan'ny hanombohanao dia tokony hihaino an'io hira io ianao.
Ampiasao ireo zavatra ireo mba hiasa, ohatra, amin'ny fanoratana ny tonian-dahatsoratra mitovy, amin'ny fanoratana ny borosy mahazatra sy ny haingo.
Tsy maintsy miasa isan'andro ianao, ny ambaratonga indrindra manimba ny faran'ny herinandro.
Boky momba ny famoronana
Manentana ny fitaomam-panahy avy amin'ny boky, maro no avy amin'ny fiainan'ny mahery fo, ohatra amin'ny fiainany. Ny tontolon'ny fahaiza-mamorona dia tsy mahazatra, mamiratra ary miramirana ao amin'ny asa maro fantatry ny mpanoratra:
"Hisakafo tahaka ny mpanakanto iray" Austin Cleon . Ny mpamaky dia miteny amin'ireo mpamaky hoe ahoana no ahafahana mamantatra ny famoronana.
"Muse, aiza ny elatrao?" Yana Frank dia feno ny aingam-panahy ary nosoratana ho an'ireo olona izay nanapa-kevitra ny hanokana ny fiainany manontolo amin'ny famoronana.
"Ny fampisehoana hevitra" i Scott Belksy dia hilaza aminao ny fomba handresena fisalasalana, hamaha ny olana ary hamita ny valiny.
Ny "Genius mandidy" avy amin'ny mpanoratra Mark Levy dia manome fomba tsy mahazatra hahitana vahaolana amin'ny olana - famotsorana.
"Mamorona sy mivarotra" S. Voinskaya . Ny boky dia manambara ny fomba hivarotana ny voary.
Fampandrosoana fisainana ara-panoharana
Ny fahalalana manan-danja eo amin'izao tontolo izao - ny fototra sy ny fototra
Inona no atao hoe stereotype - ny fiheverana mahazatra indrindra amin'ny fiaraha-monina maoderina
Inona no tsy firaharahiana ary inona no hatao raha tsy maniry zavatra ianao?
Tsiaro ny Audience
Ny Pragmatism sy ny fampitandremana - ny fiantohana ny fiainana tsara
Aleo manasa varavarana?
Porridge "Fianakaviana" ao amin'ny fomba amam-panao mahazatra marobe 9
Ny ravina dia mivoaka amin'ny osteochondrosis
Aglaonema - fikarakarana tokantrano
Famafazana ny tany ambany
Kabinetra eo ambanin'ny birao
The meniscus medial
Hevitra misongadina 2018 - Moa ve lamaody ny marika amin'ny 2018?
Ny brunette mistery dia nanintona an'i Keanu Reeves
Fanaovana hazavana mavo nandritra ny fitondrana vohoka
Ahoana no hahasarika azy?
Sandals - Summer 2016
Fibromyoma ny tranonjaza
Tsiranoka amin'ny taovam-pananahana